Erciyes ကမ္ဘာ့တန်ဖိုး - rayhab ဖြစ်ပါသည်
[21 / 08 / 2019] KARDEMİRစက်တင်ဘာလအတွင်းရထားဘီးစီးရီးထုတ်လုပ်မှုစတင်	78 Karabük
[21 / 08 / 2019] Amtrak နယူးလမ်းကြောင်းကြေညာ!	1 အမေရိကတိုက်
[21 / 08 / 2019] Selemçဘဆ်ွမြေထဲမီးရထားမှအီရန်တုပ်နှောင်ဖို့	98 အီရန်
[21 / 08 / 2019] ဝန်ကြီးဌာန 200 Ballıkayalarသဘာဝတရားပန်းခြံထဲကနေသန်း-တစ်နှစ်တာအဝေးပြေးကျော်ပြီ	41 Kocaeli
[21 / 08 / 2019] ဤတွင်သစ်ကိုစည်ပင်သာယာဘတ်စ်ကားလိုင်းများနှင့် Denizli အရေအတွက်များမှာ	33 Mersin
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး38 KayseriErciyes တစ်ဦးသည်ကမ္ဘာ့တန်ဖိုး
08 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 38 Kayseri, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, တူရကီ, TELPHER 0
တန်ဖိုး dunyanin erciyes
Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Mamdouh Büyükkılıç'ın, Erciyes မှာအရေးပါသောအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့တယ်။ Erciyes သူခဏရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှခွဲဝေအဆောက်အဦကလွန်ခဲ့တဲ့သူတို့၏မြေကိုလုပ်လိုBüyükkılıçနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်Büyükkılıç Erciyes ရဲ့တန်ဖိုးရှိကမ္ဘာ့သာဒီတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုသူတို့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏ဝန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောလမ်းကယ်နှုတ်တော်မူဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်တန်ဖိုးရှိမဟုတ်ပါဘူးသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ ခွဲဝေချောထုပ်လွန်ခဲ့တဲ့724 နှစ်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအောင်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အတူ Mamdouh Büyükkılıç'ın, အစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့တယ်။ Büyükkılıçသမ္မတ, အစည်းအဝေးမှာအားလုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏အမြင်များကိုယူ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများများ၏အမြင်များသတ်မှတ်ခြင်းပြီးနောက်ကော်ပိုရေးရှင်း Erciyes ကပြောပါတယ် ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာ Murat Cahid Cıngı, Erciyes ဤမြို့ကို၏အရေးအပါဆုံးဘဏ္ဍာကိုကပြောသည်။ Erciyes သူ့ဟာသူအတွက်တန်ဖိုးရှိ၏ Kayseri Erciyes နိုင်ငံတော်သမ္မတ Mamdouh Büyükkılıç'ınဒါပေမယ့်လည်းသူတို့Cıngıလုပ်နေတာအရေးကြီးသောအလုပ် ", အလေးပေးကူညီပံ့ပိုးရန်သည်အခြားထုတ်ကုန်များအတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတရှိလူများ၏အကျိုးအတွက်တစ်ခုလုံးကိုမြို့ခရီးသွားလုပ်ငန်းစာရင်းအစေခံရန်အလွန်လေးနက်သောစီမံကိန်းများကိုဖျော်ဖြေနေသည်။ Koramaz ချိုင့်, Kapuzbaşıရေတံခွန်, ထိုကဲ့သို့သောHürmetçရွာအဖြစ်တန်ဖိုး Erciyes ခရီးသွားလုပ်ငန်းပေါင်းစည်းဖို့ကြိုးစားနေသည်။ Erciyes အပတ်တိုင်းတိုင်းပြည်ကနေပြီးခဲ့သည့်နှစ်က3ဝေဟင်သို့ရောက်ကြ၏။ ဒီနှစ်မှာတော့ 4-5 ပျေါမှာရှိပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု 10 30 နှစ်ကြာပြီးနောက်လေယာဉ်တစ်စင်းကိုဆိုလိုတာ။ အဆိုပါခရီးသွားဧည့်အနေဖြင့်သုံးကြိမ်အစ္စတန်ဘူလ်ကနေတဆင့်တိုးရစ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်လာမယ့်။ ရုရှားနှင့်ယူကရိန်း Erciyes ယခုmarkalaşıy "ဟု၎င်းကပြောသည်။
မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Mamdouh Büyükkılıç'ınကိုလည်းအစည်းအဝေး၏အကဲဖြတ်ပါဝင်ခဲ့သူအပေါင်းတို့သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများများ၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်သူတို့စိတ်ထဲမှာBüyükkılıçအတွက်မေးခွန်းအမှတ်ဖြေဆိုကြောင်းဖော်ပြနိုင်ငံတော်သမ္မတလက်ခံရရှိသောအစည်းအဝေးအတွင်းတန်ဖိုးရှိရှိအစည်းအဝေးကိုသူတို့လုပ်ဆောင်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ Kayseri Erciyes နှင့်မသာကျနော်တို့နိုင်ငံမှာကမ္ဘာကြီးတန်ဖိုးကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကဤတန်ဖိုးကိုအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအတွက်ပေးအပ်ခံရဖို့လိုအပ်သောအားထုတ်မှုဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း "သမ္မတ Mamdouh Büyükkılıç'ınအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ကြောင်း။ နွေရာသီခရီးသွားလုပ်ငန်းများအတွက်နှင်းလျှောစီးခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖြစ်သာမက Erciyes သို့တွန်းအားပေးရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု၏ရှေ့တန်းမှအတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ, yüreklenဦးတည်ချက်သူတို့ကစက်ရုံများ၏ဆောက်လုပ်ရေး start, ငါတို့သည်အလိုတော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စတင်ရန်ကြောင်းသိမြင်ရကြ၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပြုပါလိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။
Kayseri Erciyes တစ်ဦးသည်ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးတန်ဖိုး 03 / 08 / 2017 Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကသူ့အလုပ်နှင့်ပစ်မှတ်ကိုနှိပ်ဖို့ Erciyes မှာအများပြည်သူကရှင်းပြခဲ့သည်နှင့်မြို့တော်၏တတိယအစည်းအဝေးတစ်ယူနစ်များ၏လှုပ်ရှားမှုများအပတ်တိုင်း Erciyes မြူနီစီပယ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ Erciyes နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု-related ရည်ရွယ်ချက်များသတင်းစာနှင့်အများပြည်သူနှင့်အတူမျှဝေခဲ့ကြသည်ကမ္ဘာ့အဓိကနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုဖြစ်လာသည့်အစည်းအဝေးသည်မြို့တော်မြူနီစီပယ်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ။ မြို့တော်ဝန် Mustafa Celik သူတို့ Erciyes ၏မြို့ပိုမိုအမြတ်အစွန်းကိုရောက်စေဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။ Kayseri Erciyes Inc ကိုရဲ့ On-site ကိုအစည်းအဝေး၏မြို့တော်မြူနီစီပယ် Erciyes မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆက်ကြသည်။ ဒါကြောင့်ယခုနှစ် 2005 အတွက်စတင်မယ့်သမိုင်းရှိပါတယ်အတွက်အစည်းအဝေးတွင်မြို့တော်ဝန် Mustafa Celik, Erciyes ၏မြူနီစီပယ်ဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများစကားပြောသော ...
TÜDEMSAŞကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တခုရဲ့အရေးကြီး Value ကို 24 / 02 / 2017 TÜDEMSAŞကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တခုရဲ့အရေးကြီး Value ကို: Sivas အထူးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Mehmet Kaya နှင့် Nebi Sivas ပြည်နယ်အထွေထွေညီလာခံကိုသမ္မတ Sadat Özata, TÜDEMSAŞသွားရောက်ခဲ့သည်။ Yildiray KoçarslTÜDEMSAŞမှ General Manager, Mehmet Kaya နှင့် Nebi ÖZATA Sadat ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများနှင့်စီမံကိန်းများကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏။ ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပြုပြင်ခြင်းစက်ရုံ, ဂဟေဆော်ခြင်းသင်တန်းကျောင်း, အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးဓာတ်ခွဲခန်း၏ကျောက်, Yildiray KoçarslÖzataမှ General Manager ဖြင့်လိုက်ပါသွား, နှင့်ပစ္စည်းလယ်ကွင်းသွားရောက်လည်ပတ်၏လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်ကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ အထူးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Naba Kumar က, TÜDEMSAŞDemirağ2အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒါဝိဒ်သည်ဂူးလ်၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအဆိုပါစည်းရုံးရေးသဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်။ ဖှဲ့စညျး ...
Bursan ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်တန်ဖိုးသည်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်တွင်မြင့်တက်နေသည် 26 / 09 / 2016 Bursan ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်တန်ဖိုးသည်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်တွင်မြင့်တက်နေသည်: Bursa မြို့တော်ဝန် Recep Altepe, စီးပွားဖြစ်ယာဉ်များ 2016 ဂျာမနီမှာ InnoTrans တရားမျှတတဲ့ကျင်းပခဲ့ပြီးတက်ရောက်ခြင်းစက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများကသွားရောက်ခဲ့သည်။ Bursa မြို့တော်ဝန် Recep Altepe, စီးပွားဖြစ်ယာဉ်များ 2016 ဂျာမနီမှာ InnoTrans တရားမျှတတဲ့ကျင်းပခဲ့ပြီးတက်ရောက်ခြင်းစက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများကသွားရောက်ခဲ့သည်။ ဂျာမဏီရဲ့မြို့တော်ဘာလင်ရထားလမ်း, အဝေးပြေးလမ်းမကြီး၌ရှိသောနှစ်နှစ်ကျင်းပဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုမိတ်ဆက်ပြသသည်, InnoTrans သူတံဆိပ်ခေါင်းတူရကီကုမ္ပဏီများကအလေးပေး xnumx'y ။ တူရကီကုမ္ပဏီ၏ browsing အတွက် Bursa မြို့တော်ဝန် Recep Altepe အနီးရှိ 2016 ပူးပေါင်းထားတဲ့အဆင်းလှသော, ကုမ္ပဏီ၏ Bursa 80 အဲဒီကုမ္ပဏီတွေကအကြားရပ်တည် ...
ဧရာမစီမံကိန်းများဥရောပဘက်ခြမ်းပြန်လည်ခဲ့သည်! ဒေသတွင်း၌နေအိမ်များ၏တန်ဖိုးနှစ်ဆထားပါတယ် 12 / 10 / 2016 ဧရာမစီမံကိန်းများဥရောပဘက်ခြမ်းပြန်လည်ခဲ့သည်! အဆိုပါဒေသတွင်း၌အိမ်များတန်ဖိုးကြံ့ကြံ့ခံထားပါတယ်: အစ္စတန်ဘူလ်အကောင်အထည်ဖော်အကြီးစားစီမံကိန်းများ, ထို့အပြင်အိမ်ရာကဏ္ဍထိခိုက် .. .Dev စီမံကိန်းများ, အချို့သောဒေသများရှိအိမ်ခြံမြေစျေးနှုန်းများတိုးမြှင့် .. ဒီဧရိယာအတွင်းရှိနေအိမ်များ၏ဂုဏ်သတ္တိများ5ကြမ်းပြင်တန်ဖိုးထားခဲ့ကြသည် .. အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်3။ လေဆိပ်, Marmaray,3။ အိမ်ရာစျေးနှုန်းများနှစ်ဆရှိသည်ဟုအချို့သောဒေသများရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူတံတား, အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်မြောက်ကိုရီးယား Marmara ကားလမ်းနှင့်မီထရို။ Sefaköy-Halkalıတစ်ချိန်ကမီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်း၏ဗဟိုနှင့်လူနေအိမ်အဆိုပါဝှမ်း Express ကိုအဝေးပြေး, ရုံး, ဟိုတယ်နှင့်စျေးဝယ်ကုန်တိုက်စီမံကိန်းကိုနှင့်အတူတစ်ခုလုံးအသစ်သောဝိသေသလက္ခဏာပေါ်ကြာ-Güneşl။ Ataturk လေဆိပ်, ကမ်းရိုးတန်းလမ်းကြောင်းကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ E-5, နှင့် TEM Sefaköy Halkalı - ဆန်နီလိုင်း ...
Erciyes နှင်းလျှောစီး Center က Erciyes ဖလားစိတ်လှုပ်ရှား 08 / 01 / 2017 Erciyes နှင်းလျှောစီး Center က Erciyes ဖလားစိတ်လှုပ်ရှား Erciyes နှင်းလျှောစီးစင်တာ, Erciyes ဖလားကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်လုပ်နေတာ 07-08 ဇန်နဝါရီလ 2017 နေ့စွဲအတွက် ... အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ skiers အတွက်နှင်းလျှောစီးစင်တာနှင့်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်အများအပြားတွင်နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲ Erciyes နှင်းလျှောစီးရေးစင်တာရှိသည်ဖို့တူရကီရဲ့အကောင်းဆုံးနည်းပညာဆိုင်ရာနည်းလမ်းများယှဉ်ပြိုင်ပါလိမ့်မယ် များစွာသောပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအားကစားသမားများနှင့် kayaksever တှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်သည့် Erciyes ဖလားပြိုင်ပွဲဧည့်သည်များဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ xnumx'n အပေါ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် skiers ၏ပါဝင်မှုအပါအဝင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအမျိုးအစား, လူဇင်ဘတ်, တူရကီ, ပါကစ္စတန်နှင့်လည်းထိုကဲ့သို့သောအယ်လ်ဘေးနီးယားအဖြစ်နိုင်ငံများတွင်, Erciyes ဖလားတွေ့ရသော Erciyes နှင်းလျှောစီး Center ကဘုရားဖူးတံခါးကိုလမ်းကြောင်းမှာကျင်းပပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါအားကစားသမားများ, ပြိုင်ပွဲဧရာ slalom လူမျိုး၌ဤရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအရပျကိုယူပါလိမ့်မယ် ...
Erciyes နှင်းလျှောစီး Center ကကမ္ဘာ့အများစုကသောင့်သက်သာရာဌာနဖြစ်လာ 13 / 02 / 2015 ယခု Erciyes နှင်းလျှောစီးစင်တာkızakçı၏လုံခြုံရေးကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်း, xnumx't BRN ကုတင်မှအိပ်ရာကျော်ကမ္ဘာ့တင်ပို့နိုင်ငံများ: ။ Erciyes နှင်းလျှောစီး Center ကကမ္ဘာ့အများစုကသောင့်သက်သာရာဌာနဖြစ်လာ 60 အတွက် '' ကမ္ဘာ့အများစုကသောင့်သက်သာရာဌာန '' ဆောင်ပုဒ်တိုင်းလိုအပ်ချက်များအတွက်တီထွင်ခြင်းနှင့်အိပ်ရာအလိုရှိကြသည်တွင်, ဝက်တစ်နှစ်အားလပ်ရက်၏ BRN B ကိုတထောင်လူများ, ဧညျ့အောင်မြင်မှုဖေါ်ပြခြင်းကမ္ဘာပေါ်တွင်အရှည်ဆုံးပြေးလမ်းအကြား Erciyes နှင်းလျှောစီးရေးစင်တာအတွက် firewall ကတည်ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ toboggan ပြေးထဲတွင်နေရာအိပ်ရာမှ 500 100 BRN မီတာ finish ကိုဧရိယာ, သူတို့ကိုအထူးသဖြင့်လုံခြုံစွာအလွန်သေးငယ်သောစလစ်kızakçıစေသည်။ သူတို့ကထုတ်လုပ်မှုဆင်တူ BRN ကုတင်ကာလအတွင်းလုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ကျန်းမာရေးဖို့အရေးကြီးပုံကိုပေးသည်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်း ...
Erciyes ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးခရီးသွားလုပ်ငန်းပြပွဲမှာမိတ်ဆက် 13 / 03 / 2017 Erciyes ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းအဆင်းလှသောမှာမိတ်ဆက်: ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးသွားစင်တာများတဦးဖြစ်လာသည့် Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် Erciyes, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးခရီးသွားလုပ်ငန်းကုန်စည်ပြပွဲသည် ITB ဘာလင်နိုင်ငံတကာခရီးသွားလုပ်ငန်းပြပွဲစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ မြို့တော်မြူနီစီပယ်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးသွားတစ်ဦးဖြစ်လာသည် Erciyes, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးခရီးသွားလုပ်ငန်းကုန်စည်ပြပွဲသည် ITB ဘာလင်နိုင်ငံတကာခရီးသွားလုပ်ငန်းပြပွဲစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်စင်တာ။ မတ်လ 8-12 အကြားကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးခရီးသွားလုပ်ငန်းတရားမျှတတဲ့ ITB ဘာလင်နိုင်ငံတကာခရီးသွားလုပ်ငန်းပြပွဲတစ်ဦးအဖြစ်မွှမ်းတင်ဂျာမန်မြို့တော်ဘာလင်တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးစုရုံးတ ITB ဘာလင်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းတရားမျှတသောပု 184 နိုင်ငံဖြစ်ပါသည် ...
Erciyes တစ်ခုကြီးမားနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း 15 / 03 / 2014 Erciyes ကမ္ဘာ့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးသွားလုပ်ငန်းလောကီသားတို့သည်အ xnumx'lik ရာခိုင်နှုန်းကိုရှယ်ယာတစ်ခုကြီးမားနှင်းလျှောစီးစင်တာအရေးကြီးဆုံးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်တာသြစတြီးယားနှင့် Kayseri Erciyes အတွက်အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိအတွက်နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း၏ပိုင်ရှင်များထံမှလက်ခံရရှိခဲ့သည်နေသည်ကိုတွေ့မြင်သို့ရောက်ကြ၏။ Erciyes ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်တာစီးပွားရေးသမားများဖော်ပြထက်အများကြီးပိုထိခိုက်ခဲ့ Erciyes ကနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကြီးမားတဲ့နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းပါလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်။ Erciyes နှစ်ဦးစလုံး skiers သည့်ပုဒ် Erciyes ပရိတ်သတ်တွေခဲ့ဆန်းစစ်ဖို့နီးကပ်ဘူတာရုံများနှင့်သြစတြီးယားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှစ်ဦးစလုံးမှထိပ်သီးအစည်းအဝေးဖို့ကြိုးတပ်စီး။ , Kayseri Erciyes Inc က ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Yucel စျယောကျစီ, 25 Erciyes နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းအတွက်သီးခြားအဆောက်အဦ၏စီမံခန့်ခွဲသူအဘို့အထဲသို့ပြေး ဝင်. ...
Erciyes 's သူမ၏ခင်ပွန်း၏ထိပ်ပေါ်မှာတစ်မြို့, Kayseri ရဲ့အဆင်သင့်ထူထောင် 17 / 03 / 2014 သူမ၏ခင်ပွန်း၏ထိပ်ပေါ်မှာ Erciyes ့မြို့တည်ထောင်ခဲ့သည်, Kayseri ကအဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ "သင်ကယခုနှစ်အအေးဆုံးနေ့၌ Kayseri ဆီသို့ရောက် လာ. ," သူတို့ကဆိုကြသည်။ တစ်ဦးကြံ့ခိုင်အအေးနေ့ကိုအလယ်၌ရှိပါသည်။ ငါသိသာမိုဃ်းပွင့်ကျသွားသည် Erciyes, မြူဆိုင်းလျက်ရှိသောကြည့်မှာရှာဖွေနေတာပါ။ Kayseri Erciyes Inc ကိုဥက္ကဋ္ဌနှင့် CEO ဖြစ်သူဒေါက်တာ ငါသူ Erciyes အတွက် KAYSON အဆောက်အဦနှင့်အတူ Murat Cahit Cıngıမိတ်ဆက်ပေးနိုင်ရန်အတွက် Dane kayaksever ဖျော်ဖြေမှုညဉ့်ကိုလည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အချိန်မရှိခြင်းကျနော်တို့လာမယ့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့သဘောတူညီမှုရှိခဲ့, တောင်ထံမှထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။ အမြတ်အစွန်းများစွာတနေ့ Pre-နားထောင်အမျိုးအစားထဲကနေ IPZ Anatolian Kayseri ညီလာခံများအတွက်မြို့ကိုသွားဒေါက်တာ ငါသည်ငါ့ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သော Ching ထားရှိမည်။ Kayseri Erciyes ၏စက်မှုမြို့အဖြစ်ကောင်းစွာဖန်ဆင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ၏ခေါင်းစဉ်ကိုမြင်လျှင် ...
တူရကီအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်, Erciyes မှာနှင်းဘောလီဘောပြိုင်ပွဲ 13 / 02 / 2017 အဆိုပါကမ္ဘာ့အဆင့်မီအဆောက်အဦများနှင့်ပြေးလမ်းနှင့်အတူအဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ၏မြူနီစီပယ်၏ရလဒ်အဖြစ် 2017 CEVA နှင်းဘောလီဘောဥရောပဖလား, 18-19 ဖေဖော်ဝါရီလပထမဦးဆုံးအကြိမ်တူရကီအတွက် Erciyes များအတွက်ကျင်းပလိမ့်မည် ... Kayseri မြို့တော်: တူရကီအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်, Erciyes ပြိုင်ပွဲမှာနှင်းဘောလီဘော "Universal ဆောင်းရာသီ Center က" Erciyes နှင်းလျှောစီးရေးစင်တာများ၏အနေအထားကနေ, အမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာအားကစားဖြစ်ရပ်များကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပနေဆဲဖြစ်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ 18 19 2017-date ဖြစ်အောင်အပေါ်တူရကီ Erciyes နှင်းလျှောစီးရေးစင်တာဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြင့်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအားကစားအတွက်ပထမဦးဆုံးကမ္ဘာကခေတ်ရေစီးကြောင်း, တည်ခင်းဧည်ခံရဖို့မကြာသေးမီက "နှင်းဘောလီဘော" ပြိုင်ပွဲများ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လက်မှတ်ရေးထိုး။ ဒါဟာ 2017 နှင်းဘောလီဘော CEV ဥရောပဖလားပထမဦးဆုံး xnumx.tur နိုင်ငံတကာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားသမားတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုစင်ပေါ်ကိုပါလိမ့်မယ် ...
ဇန်နဝါရီလ 80 TÜDEMSAŞလည်ပတ်သူများ၏အဘSusmuş
အသိအမှတ်ပြုတွဲဖက် Paragliding လေယာဉ်မှူး
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Gurpinar အဆောက်အအုံစွမ်းအင်ဂီယာလိုင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင် siding
Kayseri Erciyes တစ်ဦးသည်ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးတန်ဖိုး
TÜDEMSAŞကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တခုရဲ့အရေးကြီး Value ကို
Erciyes နှင်းလျှောစီး Center ကကမ္ဘာ့အများစုကသောင့်သက်သာရာဌာနဖြစ်လာ
Erciyes 's သူမ၏ခင်ပွန်း၏ထိပ်ပေါ်မှာတစ်မြို့, Kayseri ရဲ့အဆင်သင့်ထူထောင်
တူရကီအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်, Erciyes မှာနှင်းဘောလီဘောပြိုင်ပွဲ
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ သြဂုတ်လ 2019 (316) ဇူလိုင်လ 2019 (636) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (525) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (520) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (436) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (580) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (555) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (494) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (536) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (770) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (809) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (831) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)